I Zilpa (hebreo: זִלְפָּה / Zilpāh) dia olona resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. mpanompovavin'i Lea vadin'i Jakoba izy sady lasa vady fahefatr'i Jakoba ihany koa araka ny fanomezan-dalan'i Lea. Niteraka an'i Gada sy i Asera izy.
I Asera (hebreo: אָשֵׁר / ʾAsher) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly, zanaka fahavalon'i Jakoba. I Zilpa no anaran-dreniny izay mpanompovavin'i Lea vadin'i Jakoba.
I Benjamina (hebreo: בנימין) dia zanaka faha-13 sady faralahin'i Jakoba. I Rahely no anaran-dreniny. I Josefa irery ihany no rahalahy iray reny aminy. Tamin'ny fotoana nahamosarena ny tany dia tsy nalefan-drainy hiaraka amin'ireo rahalahiny folo ho any Egipta hitady sakafo izy fa notazoniny teo aminy. Rehefa tonga tany anefa ireo rahalahiny ireo dia noteren'ilay manampahefana ambony, izay tsy iza fa i Josefa rahalahin'izy ireo ihany izay namidiny taloha. Rehefa tonga tany Egipta i Benjamina vao niseho tamin'ireo rahalahiny amin'izay i Josefa nampahalala ny tenany.
I Bila (hebreo: בִּלְהָה / Bilhâ) dia olona resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Mpanompovavin'i Rahely vadin'i Jakoba izy nefa lasa vadin'i Jakoba ihany koa araka ny fanomezan-dalan'i Rahely izay kivy noho ny tsy nanany zanaka. I Dana sy i Naftaly no zanany izay nalain'i Rahely ho zanany koa. Raha ny marina dia nanan-janaka ihany i Rahely taty aoriana.
I Dana (hebreo: דָּן, / Dan) dia lehilahy resahina ao amin'ny Baiboly. Izy no zanaka fahadimin'i Jakoba tamin'i Bila mpanompovavin'i Rahely vadin'i Jakoba. Atao hoe Danita ny taranany.
Ny fokon'i Gada dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely.
I Gada (hebreo: גָּד‬ / Gad) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly, zanaka fahafiton'i Jakoba sady zanany tamin'i Zilpa mpanompovavin'i Lea vadiny izay mbola tsy afa-niteraka. Tantaraina ao amin'ny toko faha-30n'ny Bokin'ny Genesisy ny nahaterahany. Atao hoe Gadita ny taranany.
I Isakara (hebreo: יִשָּׂשכָר‬ / Yissakhar) dia olona resahina ao amin'ny Baiboly. Zanaka fahasivin'i Jakoba izy sady zanany fahadimy tamin'i Lea. Mety ho avy amin'ny aranan'i Isakara ny anaran'i Jodasy Iskariota, ilay mpianatra namadika an'i Jesoa.
Jakoba (patriarka hebreo)
I Jakoba dia lehilahy iray voalaza ao amin'ny Baiboly fa zanak'i Isaka sy rahalahin'i Esao. Isan'ireo Patriarka nanao fanekena tamin'Andriamanitra izy. I Jakoba dia antsoina koa hoe Israely taorian'ny fitolomany tamin'ny anjelin'Andriamanitra ka ireo taranany dia atao hoe Israelita na Zanak'i Israely.
Nanompo an'Andriamanitra tokana izy (monoteisma) ka nandova ny fampanantenana natao tamin'ireo razany dia ny hanana taranaka maro izay homena tany mahavokatra, dia ny Tany Kanana. Nanambady efatra izy ka niteraka an'ireo zanilahy nipoiran'ny foko roa ambin'ny folo. Niharan'ny fanandevozana tany Egipta ny taranany alohan'ny honenan'izy ireo any amin'ny tany nampanantenaina azy. Tsy ny Baiboly ihany no ahitana ny tantaran'i Jakoba fa ny boky masina sasany toy ny Kor'any koa.
Nampirafy i Jakoba ka ireto ireo vehivavy niterahany: i Lea sy i Rahely sy i Zilpa ary i Bila. Ny roa voalohany, izay mpirahavavy zanak'i Labàna, no tena vadiny fa ny roa farany dia mpanompo vaviny.
Ireto avy ireo zanak'i Jakoba tamin'ireo vehivavy efatra ireo:
i Lea niteraka an'i Robena, i Simeona, i Levy, i Joda, i Isakara ary i Zebolona (na Zabolôna);
i Bila niteraka an'i Dana sy i Naftaly (na Neftaly);
i Zilpa niteraka an'i Gada sy i Asera;
i Rahely niteraka an'i Josefa sy i Benjamina. Izy ireo no nanjary razamben'ny foko roa ambin'ny folon'i Israely. Tsy nanana zanakavavy afa-tsy i Dina i Jakoba izay zanany tamin'i Lea.
Joda (zanak'i Jakoba)
I Joda (hebreo: יְהוּדָה‎ / Yehudah) dia lehilahy voaresaka ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Zanaka fahefatr'i Jakoba tamin'i Lea izy, dia i Jakoba zanak'i Isaka. Izy ilay nandresy lahatra ireo rahalahiny hivarotra an'i Josefa tamin'ireo Ismaelita mpividy olona fa tsy hamono azy (Gen. 36.26-27); izy no niantoka ny hampodiana an'i Benjamina faralahin'i Jakoba eo amin-drainy mba hahafahana mitondra azy any Egipta, araka ny sitrapon'ilay manampahefana egiptiana (izay tsy iza fa
i Josefa ihany); izy no nano-lotena tamin'io manampahefanagejtpsiana io mba ho tazomina ho solon'i Benjamina voampanga ho nangalatra nefa tokony hampodina any amin-drainy.
I Joda, fa tsy i Robena lahimatoa, no nahazo ny tsodranon'i Jakoba ho lehiben'ireo zokiny izay tsy nanaja an-drain'izy ireo satria i Robena namadika an-drainy noho ny nadriany tamin'i Bila vadin-drainy ary i Simeona sy i Levy nahatezitra an-drainy tamin'ny namonoan'izy ireo ny lehilahy rehetra tao Sikema.
Josefa (zanak'i Jakoba)
I Josefa (hebreo: יוֹסֵף‬ / Iosef) dia olona voatantara ao amin'ny Baiboly. Zanak'i Jakoba sy i Rahely izy. I Benjamina no rahalahy iray reny aminy. Manana rahalahy folo hafa tsy iray reny aminy izy. Namidin'ireo rahalahiny izay nialona azy izy nefa lasa manampahefana tany Egipta taty aoriana. Nantsoiny honina any Egipta ny fianakaviany, fantatra amin'ny hoe Zanak'i Israely, tamin'ny fotoana nahamosarena ny tany manontolo. Taorian'ny nahafatesany sy ilay Farao natoky azy no nanombohan'ny fahasahiranan'ny Zanak'i Isaraely izay nandevozin'ny Egiptiana. Manana ny fomba fitantarany an'i Josefa koa ny boky masin'ny silamo atao hoe Kor'any.
Lea (vadin'i Jakoba)
I Lea (hebreo : לֵאָה / Leah ) dia vehivavy resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly, vadin'i Jakoba voalohany izy. I Labana no rainy ary i Rahely, izay mbola vadin'i Jakoba ihany koa, dia zandriny iray tampo aminy. Niteraka zazalahy enina tamin'i Jakoba izy, dia i Robena, i Simeona, i Levy, i Joda, i Isakara ary i Zebolona -- sy zazavavy iray, dia i Dina.
Nandray anjara tamin’ny famonoana ireo lehilahy tao an-tananan-dry Sikema (na Sekema), noho ity farany nandry an-keriny tamin’i Dina, izy niaraka tamin’i Simeona (Gen. 34.25-26) ka nozonin-drainy noho izany (Gen. 49.7).Nisahana ny anjara asa mpisorona sy ny fitsarana sy ny fampitana ny fahalalana (indrindra ny fahalalana ny Torah) amin’ny Israelita rehetra ny Levita ka miaro azy ny foko 11 sisa.
I Naftaly na Neftaly (hebreo: נַפְתָּלִי‬ / Naftali) dia lehilahy resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly; zanaka fahenin'i Jakoba sady zanany faharoa tamin'i Bila mpanompovavin'i Rahely. I Rahely vadin'i Jakoba no nanome anarana an'i Naftaly.
I Rahely (hebreo רָחֵל / raḥel) dia vehivavy resahina ao amin'ny Bokin'ny Genesisy ao amin'ny Baiboly. Vadin'i Jakoba faharoa izy sady zokin'i Lea izay mbola vadin'i Jakoba koa sady samy zanak'i Labana. Roa ny zanany dia i Josefa sy i Benjamina.
I Zebolona na Zabolôna (hebreo: זְבֻלוּן‬ na זְבוּלֻן‬ na זְבוּלוּן‬ / Zeḇulun na Zevulun) dia zanak'i Jakoba fahenina, zanany farany tamin'i Lea araka ny Baiboly.